Umaka: ukukhiqizwa | Martech Zone
Lwesine, Disemba 13, 2018 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 14, i-2018 Douglas Karr
Ukusebenzisa amasu we-gamification kuyindlela enhle yokukhuthaza ithagethi yakho ukuthi iye ezingeni elilandelayo. Uma une-software ekhona noma inqubo ongathanda ukuyifaka ungqimba lwe-gamification futhi awunaso isikhathi sokuba neqembu lakho lonjiniyela lakhe isixazululo esigcwele, i-Playoff inikeza enye indlela esheshayo, ekahle. I-Playoff iyinjini yemithetho enamandla engahlanganiswa kalula nge-SDK API kunoma iyiphi
NgoLwesihlanu, Okthoba 19, 2018 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Abantu bayangihlaba umxhwele. Banikeze umyalezo omnandi wokumaketha onesaphulelo futhi bazohamba ... kepha banike ithuba lokuwina ibheji ekhasini labo lephrofayili futhi bazolilwela. Ngiyazijabulisa njengoba ngizithola ngikhathazekile ngemuva kokulahlekelwa yimeya e-Foursquare - kuyahlekisa. Yilokho nje ukugembula kuncike kukho. Kungani Ukusebenza Kukwenza Umsebenzi? Ukuqiniswa kusebenza ukwanelisa ezinye zezifiso zomuntu ezibaluleke kakhulu: ukuqashelwa nomvuzo,
NgoLwesine, July 13, 2017 NgoLwesine, July 13, 2017 Douglas Karr
Umsunguli we-B2B technology ukusheshisa ubuchwepheshe i-ConnectLeader umemezele ukutholakala kweTopRung yokuthengisa ukuthengiswa kwayo nethuluzi lokuphatha ukusebenza. I-TopRung isebenzisa amandla okuncintisana kwethimba ukuvumelanisa, ukwamukela nokusheshisa imisebenzi yokuthengisa, kanye nokwamukela inqubo yokuthengisa nokwenziwa kwezingxoxo eziholayo ezingaphezulu eziba ngamathuba wepayipi. I-TopRung isebenzisa amandla wokuncintisana kwethimba, ezemidlalo nokuzijabulisa: Ukuqondanisa, ukwamukela nokusheshisa imisebenzi yokuthengisa Ukwenziwa kwenqubo yokuthengiswa kweDrayivu Yakha izingxoxo eziningi zokuhola eziba ngamathuba wepayipi. ITopRung yaqokwa njengowamanqamu ku-